Isiqingatha | Ucanzibe 2022
Udidi Isiqingatha 2022
Iintetho ezimbini zonomathotholo zaseLos Angeles zinqunyanyisiwe ngenxa yento abaphathi bayo ababiza ngokuba 'ziimvakalelo ezingenaluvelwano nezingalunganga malunga noswelekileyo ongasekhoyo uWhitney Houston.
UMia Farrow Kubonakala ukuba ufumana iiFoto zoSapho ngokuGogo 'uMia Farrow kunye naBantwana baKhe abaNtsundu'
Umlingisi uthumele umfanekiso wentombi yakhe uQuincy Farrow ngaphandle kokukhupha amagama okukhangela 'mia farrow kunye nabantwana bakhe abamnyama.'
Iposi le-NY liHamba ngokuBulela kwiQweqwe lalo leFred Jared
Isimbozo seNew York Post yanamhlanje sikhulisa amashiya amaninzi kwimidiya yoluntu
Ukuphononongwa kweFoto Stick, Ngaba iFoto yokuNcamathela yiSkram Kufuneka ufunde ngaphambi kokuthenga
Ungajonga njani ukuba i-Photo Stick sisisombululo esifanelekileyo kuwe.
Kwikhakhayi namathambo, iklabhu eyimfihlo kaBush iqala uReam Gore
Yeyona ndawo iphambili yamandla aseMelika, amaxabiso osapho lakwaBush. Kwiminyaka engamakhulu amabini, isiko lokuqalisa kokakayi kunye namathambo lalimise isimilo samadoda abumbe umlinganiswa waseMelika, kubandakanya oMongameli ababini ogama linguBush.
UBill O'Reilly kunye noGeorge baya kuyikhupha kwiFox News
UDonald Trump unqwenela kuphela okona kulungileyo kumhlobo wakhe amthandayo, uGqirha Carson.
Ufumana njani ukuba une-ADHD engalunganga
Kuqhelekile ukukhanyela i-ADHD kunye nokulahla iziyobisi njengeyelenqe le-Big Pharma, kodwa amanani- kunye nezigulana- xelela elinye ibali ngokupheleleyo.
UJudith Miller Wathwala Amanzi kwi-USA eyona nto iphosakeleyo ukusukela eVietnam
UJudith Miller, intatheli yeNew York Times enika ingxelo ngezixhobo zikaSaddam Hussein zokutshabalalisa abantu abaninzi yanceda uBush Administration wathengisa uhlaselo lwaseIraq.
Abantu abali-13 abafanele ukubuyisela uJanet Maslin kwiThe New York Times
UNks Maslin uyehla kwaye iThe Times ifuna umntu oza kubambela.
UMazel Tov, Isibini saMandla eMidiya
U-Ezra Klein no-Annie Lowrey batshatile kule mpelaveki. UNks. Lowrey kutshanje ushiye iSlate kumgaqo-nkqubo woqoqosho wokunika ingxelo kwindawo yeWashington yeThe New York Times. Umnumzana Klein ngumbhali we Washington Post, igalelo le-MSNBC kunye nelungu le-Juicebox Mafia entsha yemithombo yeendaba.
Ukulungiswa: I-South Park ayisayi kubulala uKenny Kwisiqendu ngasinye
Ngecawa iNew York Times, uDavid Carr ubhale malunga nezoqoqosho kubukhosi baseSouth Park. Kodwa kubonakala ukuba akazange awubukele umboniso okoko bayeka ukubulala uKenny ngo-2002. Isiphumo sesinye sezilungiso ezingcono esidibene nazo.
Sala kakuhle, uVimba: Singakusebenzisa ngoku
Andiqinisekanga ukuba iMelika iyayazi indlela yokuzihleka ngayo namhlanje njengoko ibisenza njalo, utshilo uNorman Lear, umdali oneminyaka engama-82 ubudala wabo bonke osapho, uMaude, iJeffersons kunye neSanford kunye noNyana, ngaphandle kwenyani ukuba yonke loo miboniso yayisemoyeni ngexesha lolawulo lweNixon kunye neMfazwe yaseVietnam.
UGoogle Doodle ubhiyozela uAdolphe Sax weminyaka engama-201
Ihambisana nesiko likaGoogle lokukhetha isikhumbuzo esingahleliwe ukuhlonipha abantu.
Iqela leCoco: I-NPR iphosa iNtetho yeSizwe yeNeal Conan phantsi kweBhasi
I-NPR kutsha nje ibhengeze ukuba bayayeka ukusasaza i-Talk of the Nation ngoJuni, ngaloo ndlela bakhuphe enye yezona zinto zibalaseleyo zokungcatsha ukusukela uYudas kwigumbi eliphezulu okanye eDylan eRoyal Albert Hall. Ukungcatshwa kunqunyulwe kwimigca emininzi kwaye kwavakala, kule ntatheli, ngokuqinisekileyo.
Izicwangciso zeFox Zisimahla seGOP kwingxoxo-mpikiswano ngokusasaza, Ukufunda isifundo kwiDemokhrasi kwi-CNBC
Imvumelwano ibonakala ngathi iyaphuhliswa phakathi kweendlela ezinokuthi iingxoxo zikamongameli zenziwe zifumaneke kubo bonke abavoti kwi-Intanethi.
Uthi 'Yiza,' Ndithi 'Cum'
UMaureen O'Connor ulawule ingxoxo-mpikiswano yakudala kwikholamu yakhe yamaphephancwadi yaseNew York, 'Ipolitiki eNtsonkothileyo apho uza khona.'
Xa wayeqala ukuba yintatheli, uJack Patrick O'Gilfoil Healy akazange acinge kakhulu ngomgca wakhe. Utyikitye umsebenzi wakhe 'Pat Healy,' igama ahamba ngalo; Ngamanye amaxesha, wayehamba ngokusesikweni 'uPatrick Healy.' Ndicinga ukuba uPatrick noPat baninzi ngokufanayo, utshilo uMnu.
NguFox kuphela osilelayo ukuGubungela ukuhlaselwa okupheleleyo kweDemokhrasi ngokuchasene 'neCancer' uDonald Trump
Kodwa ubuncinci indoda yeFox ilunge izinto. Ngexesha leNgxelo eKhethekileyo ngentsimbi yesi-6. iyure, umhlalutyi uCharles Krauthammer uthathe umbono omde womdlalo weDemokhrasi wosuku.
UDinesh D'Souza Wabelane ngeGumbi lehotele kunye noMfazi owayengenguye uNksk D'Souza
Isithethi esingumbhali esingumbhali nombhali uDinesh D’Souza wabelana kwigumbi lasehotele noDenise Odie Joseph II, umfazi awamazisa njengegcisa lakhe, kwinyanga ephelileyo kwinkomfa yobuKrestu, uxela umagazini wevangeli i-WORLD. Nangona uMnu.
I-Economist liphephandaba, nangona lingabonakali njengelinye
I-Economist, upapasho lweveki olujongeka njengephephancwadi, ngokwenene liphephandaba. Namhlanje, kwiposti yebhlog ukuhlonipha usuku lwayo lokuzalwa lwe-170th (kwaye ixhaswe ngu-GE), iphephancwadi lephephancwadi licacisa ukuba kutheni inyanzelisa ukuzibiza njengephephandaba. Konke kubuyela ekuqaleni.
Iminyaka engama-40 eyadlulayo, uYoda wasibonisa iNyaniso yoMbutho ‘kuBukhosi’
UThomas Gilbert Jr., utyholwa ngokubulala utata ngaphezulu kwesibonelelo, uvela kwakhona phambi kovavanyo
Kutheni le nto uSacha Baron Cohen Ephume 'kwiBohemian Rhapsody'?
Owayesakuba nguMlawuli weMet Ukuthelekisa ukuFikelela kwiCrack Addiction kwiPost Post
yeyiphi eyona ndawo ilungileyo yokuthandana kwi-Intanethi
U Harry no Megan bazakuhlala phi
kufika nini ixesha le-7 lokungabi nazintloni kwi-netflix
Uyenza njani into yokubuyela umva kwifowuni
I-100 yasimahla yokujonga iifowuni
Izibonelelo zekhonkco lekhonkco lomdiliya
nguwe lo gio